Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha Dalka Filand. | warsanradio baydhabo
Kursiga saddexaad ee Golaha Shacabka oo goordhow lagu...
Dhageyso:-Barnaamijka Wax soo saarka Beeraha
Dhageyso:-Warka Duhur ee Idaacada Warsn
Beesha Caalamka oo ku baaqday in doorashadu noqoto...
Abiy Ahmed “Doorkayaga waa inaanu galnaa furinta hore...
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha Dalka Filand.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa munaasabad ku qabsoontay Madaxtooyada Qaranka, waxa uu kaga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirenimo safiirka cusub ee ay Jamhuuriyadda Finland u soo magacawday Soomaaliya Mudane Pirkka Tapiola.
Danjiraha Dowladda Finland Mudane Tapiola ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda la wadaagay dhambaal iyo salaan uu uga siday dhiggiisa Jamhuuriyadda Finland Mudane Sauli Niinisto, waxa uuna dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyey soo dhoweynta diirran ee loo sameeyey.
Madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Tapiola ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Finland, kaas oo ku dhisan wax wada-qabsi iyo iskaashi. Waxa uuna Danjire Tapiola bogaadiyey horumarka ballaaaran ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku tallaabsatay, isaga oo Madaxweynaha uga war-bixiyey dadaalka uu ku bixin doono adkaynta xiriirka diblomaasiyadeed ee Labada Dal.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay Danjiraha cusub, guulaha muuqda ee shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib-u-dhiska dalka, dib-u-heshiisiinta, Maalgashiga, la dagaallanka argagixisada iyo musuq-maasuqa.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Danjiraha Cusub ee Finland ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, wuxuu na u sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku garab istaageyso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo igmaday.
Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha Dalka Filand. was last modified: November 10th, 2021 by Admin
DFS oo si kulul ula hadashay Midowga Afrika” Qaranka Soomaaliyeed ma aqbali doono caga- jiid, been abuur ah”
Wasiirka Difaaca iyo Danjiraha Itoobiya oo kulan ku yeeshay muqdisho
TALISKA CIIDANKA XOOGA DALKA OO KA HADLEY DHACDADII MAANTA KA DHACDEY DUGSIGA JECERAL GORDAN
Deni & Axmed Madoobe oo dalbanaya in doorashada lagu soo koobo hal Magaalo
DHAGEEYSO:-Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo soo gaaray magaalada Baydhabo
Wakiilka Qaramada Midoobay James Swan oo gaaray magaalada Kismaayo
Akhriso:-Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo dib ugu soo laabtay Dalka
Akhriso:-Xaalada deegaanka Tukaraq oo degan iyo guulo labada dhinac ay kala sheegteen